HIM | Health in Myanmar » 2009 » January
Two quotes from Bogyoke
These two quotes from the father of the nation can give us pause to think. Sixty years ago some may have thought that prevention was better than cure. It was certainly cheaper. Many people today can see that prevention and care are parts of the same decisive action.
Here isajob in Yangon.
HIV/AIDS ဝေဒနာသည်များကို ရန်ကုန်မြို့မှ နှင်ထုတ်
“ဒီမှာ ဆင်းလို့ရပြီး မဆင်းနိုင်သေးတဲ့ သူတွေရှိတယ်။ ဆင်းပြီး နယ်ကို ပြန်ရမယ်လို့ (ဆေးရုံက) ပြောတယ်။ ထိုးဆေးတင် နေတဲ့လူလည်းရှိတယ်။ အေအာဗီ ဆေးစောင့်နေတဲ့လူလည်း ရှိတယ်။ ရန်ကုန်မှာပဲ ထိုးမှရမှာလို့ ပြောတာကို မရဘူး။ သူတို့ က ရန်ကုန်မှာကို နေခွင့်မပေးတာ။ ကျနော်တို့က အိမ်ငှားနေမယ် ဆိုတာလည်း မရဘူး။ သူတို့ကို အထက်က ညွှန်ကြားထားတဲ့ အနေအထားပေါ့” ဟု အာဏာပိုင်များ၏ လက်တုံ့ပြန်မှာကို စိုးရွံသည့်အတွက် အမည်မဖော်လိုသည့် ဝေဒနာသည်တဦးက မဇ္ဈိမသို့ ပြောသည်။ ကိုဝိုင်း/ ကြာသပတေးနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ 29 2009 18:26/ မဇ္ဈိမ
Costed Operational Plan available
The Costed Operational Plan for the National Strategic Plan is now available. It isavital reference document.
HIV/ AIDS ဝေဒနာသည်ကူညီနေသည့် NGO အဖွဲ့ အချို့ ရန်ပုံငွေအလွဲသုံး
မြန်မာနိုင်ငံက HIV/ AIDS ဝေဒနာသည်တွေကို ကူညီစောင့်ရှောက်ရန် 3D Fund အဖွဲ့ က NGO အဖွဲ့(၈) ဖွဲ့ ကိုရန်ပုံငွေပေးပြီး ကူညီနေရာမှ အဲဒီအထဲက တချို့ အဖွဲ့ တွေက လူနာတချို့ ကို နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အစည်းတွေ နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေသလို၊အဲဒီ အဖွဲ့ (၈) ဖွဲ့ ကတဆင့်အခြား NGO အဖွဲ့ ငယ်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေရာမှာလည်းအဖွဲ့ ငယ်တွေထဲမှာ ငွေကြေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မမှန်မကန် လုပ်နေတာတွေ ရှိနေတယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။ ၁၊၂၈၊၂၀၀၉ (RFA)သတင်း
Cherry Myo Lwin donation
Good to hear that people are donating money for the welfare of people living with HIV. And that they are writing about it on blogs …
The Myanmar Positive Group organises
You can read the notes of the organising meeting of the Myanmar Positive Group attached. Congratulations to the Group on their transparency.
HIV ဝေဒနာသည်တွေကို အဓမ္မနှင်ထုတ်
ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်က HIV ဝေဒနာသည်တွေထားရာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတကျောင်းဖြစ်တဲ့ ရေလည်ကျောင်းက ဝေဒနာသည်တွေကိုစစ်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေက ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကအဲဒီထဲကဝေဒနာသည် တချို့ ကို မြောက်ဥက္ကလာပမြို့ နယ် ဝေဘာကီဆေးရုံကို ပို့ လိုက်တယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။ ၂၄၊၁၊၂၀၀၉ (RFA) သတင်း
Clear message from Her Britannic Majesty's Ambassador to the Union of Myanmar to donors
ပြီးခဲ့သည့် ဇန်န၀ါရီလ ၁၇ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်း ယုဒသန် ခန်းမ တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ (ကိုယ်ခံအားကျဆင်းသည့် ရောဂါ) ဝေဒနာရှင်များ အတွက် ရန်ပုံငွေပွဲအပြီး အဆိုပါ ဝေဒနာရှင်များ အနက်မှ ၂၆ ဦးအား အာဏာပိုင်များက ၄င်းတို့တည်းခိုနေသော မြောက်ဥက္ကလာပ ရေလယ် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ ဝေဘာဂီဆေးရုံကြီးသို့ အတင်းအကြပ်ပြောင်းရွှေ့ ခိုင်းပြီးစောင့်ကြည့်နေသည်ဟုသိရသည်။မိုးမခ အထောက်တော် (ရန်ကုန်)
Don't forget the ICAAP in Bali
Don't forget the ICAAP in Bali this northern summer …
Pitch for Public Health in Myanmar
The [him] moderator wants to make another pitch for the excellent weblog Public Health in Myanmar. It is an excellent resource. Please pop over and takeapeek at it. http://health.ngoinmyanmar.org/